Akwụkwọ na-eme - China Shandong Yulong cellulose
Akwụkwọ Na-eme sodium carboxymethyl cellulose (CMC) bụ a ukwuu oru oma papermaking n'ụlọnga. Ya okenye ihe ngwọta nwere magburu onwe Njirimara ndị dị ka mmiri njigide, film akpụ, kwụsiri ike, na pulp eriri mmekọrita na adhesion, nke ka akwụkwọ eriri mfe mmekọrita, nile di iche iche nke fillers na-ọzọ evenly kesaa pulp ma melite Ime Otu akwụkwọ. The ngwa ntekwasa akwụkwọ nwere ike ịchịkwa rheology nke mkpuchi na dispersion nke ink. The mkpuchi usoro bụ ọbụna ...
Sodium carboxymethyl cellulose ( CMC ) bụ a ukwuu oru oma papermaking n'ụlọnga. Ya okenye ihe ngwọta nwere magburu onwe Njirimara ndị dị ka mmiri njigide, film akpụ, kwụsiri ike, na pulp eriri mmekọrita na adhesion, nke ka akwụkwọ eriri mfe mmekọrita, nile di iche iche nke fillers na-ọzọ evenly kesaa pulp ma melite Ime Otu akwụkwọ.
The ngwa ntekwasa akwụkwọ nwere ike ịchịkwa rheology nke mkpuchi na dispersion nke ink. The mkpuchi usoro bụ ọbụna na ike, na mkpuchi bụ ezigbo onye na gloss, na nwere ezigbo film akpụ onwunwe.
Na usoro nke elu sizing, ike na ire ụtọ nke akwụkwọ nwere ike mma, na-eyi ndị na-eguzogide, ire ụtọ na n'elu ike nke akwụkwọ na-amụba, na ink absorption onwunwe nwere ike mma na-ebi akwụkwọ àgwà na-akakwa mma.
Akwụkwọ na-eme ọkwa CMC ụdị: pl-5, pl-10, pl-20, pl-30, PL60, PL100
Next: asa ezé Industry